ငရုတ်ကောင်းအားလုံးအတူတူလား? အစိမ်း၊ အဝါရောင်နှင့်အနီရောင်တို့သည်၎င်းတို့မည်မျှမှည့်သောနေသည်ကိုပြသပါသလား။ - သတင်း
အနီရောင်၊ အဝါရောင်နှင့်စိမ်းလန်းသောငရုတ်ကောင်းများသည်တူညီသလော။ ငါတို့သည်သင်တို့၏အကြိုက်ဆုံး capsicum ဒဏ္debာရီ debunk
နားထောင်ပါ၊ ငရုတ်သီးနှင့် ပတ်သက်၍ အနတ္တအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုယခုသင်ကြားပြီးပြီ။ ငရုတ်ကောင်းအားလုံးအတူတူလား? အထူးသဖြင့်ဤဗိုင်းရပ်စ်တွစ်တာသည်ငရုတ်သီး၏အရောင်အားလုံးသည်ရင့်မှည့်သောငရုတ်ကောင်းတစ်မျိုးသာဖြစ်သည်ဟုလူတို့အားယုံကြည်စေသည်။
အိုကေ၊ စိမ်းစိမ်းတွေအဝါရောင်ပြောင်းတယ်၊ ပြီးတော့လိမ္မော်ရောင်နီရဲတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ သူတို့ကငရုတ်သီးအားလုံးအတူတူပဲ။
- မေီ (@callmeamye) စက်တင်ဘာ 11, 2018
မှန်လျှင်ကြီးမား။ 52.1k ကလူကအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ မင်းရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကမင်းကိုစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်လာအောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ ဒါဟာအားလုံး bollocks ပါပဲ။
ငရုတ်ကောင်းလုပ်ပါ အရောင်တွေပြောင်းပါ ။ သို့သော်အနီရောင်နှင့်အစိမ်းနှင့်အဝါရောင်ငရုတ်ကောင်းတို့သည် အားလုံးမဟုတ်အတူတူပင်။
သိပ္ပံပညာကဒဏ္theာရီတစိတ်တပိုင်းကိုပြောတာပါ။ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လုံးများဖြစ်သော Moser နှင့် Matile တို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ သူတို့ရဲ့ ၁၉၉၆ စက္ကူ 'Chlorophyll' ၏မှည့်သောအသီးများကိုဖြိုခွဲသည် အာလူး ဒေသခံကုန်သည်တွေဆီကရရှိတဲ့ငရုတ်ကောင်းတစ်မျိုးကိုသူတို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။
GCSE သိပ္ပံကိုသင်မှတ်မိလျှင်ကလိုရိုပလပ်စ်များသည်အပင်များကိုစိမ်းလန်းစေသည့်အရာများဖြစ်သည်။ Moser နှင့် Matile တို့ကငရုတ်သီးမှည့ ်၍ အနီသို့မဟုတ်အဝါရောင်ဖြစ်သော chromoplast သို့ပြောင်းသွားခြင်းနှင့်အစိမ်းမှအနီရောင်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းရှင်းပြသည်။
ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာဒဏ္'sာရီပါ။ ငရုတ်ကောင်းကအစိမ်းရောင်၊ အ ၀ ါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အနီရောင်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်အပြည့်အ ၀ မှည့်လာသည်နှင့်အမျှငရုတ်သီးတစ်လုံးသွားလာနိုင်သည်။ အဝါရောင်ငရုတ်ကောင်းရုံမှည့်ကြသည်မဟုတ်။
Heather Rae ငယ်ရွယ်အရောင်းရဆုံးနေဝင်ချိန် instagram
ငရုတ်ကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းရဲ့ဒီအင်အေကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတယ်။ အရောင်ခြယ်မှုန့်ပိုများလေပိုမိုငရုတ်ကောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အဝါရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်နှင့်အနီရောင်ငရုတ်ကောင်းများသည်အမှန်တကယ်တွင်မတူညီသောမျိုးကွဲများဖြစ်သည်။
- ဂျိမ်းဝမ် (@Botanygeek) စက်တင်ဘာ 14, 2018
အထီးလေးခု၊ မိန်းမအတွက်သုံးခု။ ရုံဒီ meme ကိုကြည့်ပါ။
ဒါလိုက်တယ် ပထမအချက် - သင်၏ခေတ်မမီတော့သောကျားမအခန်းကဏ္aကိုပကတိအသီးများပေါ်တွင်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
နှစ် - ကမှားနေတယ်။
၎င်းတို့သည်မည်သည့်သုပ် (အချဉ်ဆိုးသော) မဆိုအသန့်ရှင်းဆုံးသောအရာများဖြစ်သော်လည်းငရုတ်ကောင်းသည်မနမ်းပါ။
ဒါဟာတစ် ဦး နဲ့တစ် ဦး မျိုးပွားနိုင်တဲ့ငရုတ်သီးမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကြီးထွားသောအပင်များသည်ထိုသို့ပြုသည်။
ဒီမှာသိပ္ပံပညာရှင်လည်းရှိတယ်။ ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ UC Riverside မှ Pomologist (အသီးလေ့လာသူ) David Karp, KRCW သို့ပြောသည် : ငရုတ်ကောင်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်ရှိသည်ဟူသောယူဆချက်သည်သာမန်ကြံတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးမှားသည်။ ငရုတ်ကောင်းသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်ပါသောပန်းများမှကြီးထွားသည်။ အသီးမှာကျားမမပါဘူး။
Michael ပထမ ဦး ဆုံးမျက်မှောက်အလုပ်မှာလက်ထပ်ခဲ့သည်
• ထို့ကြောင့်လူအချို့က Yanny နှင့် Laurel ကိုထိုအသံဖိုင်တွင်ကြားနိုင်သည်
Waitrose သည် 'ကျောင်းသားအခြေခံလိုအပ်ချက်များ' စာရင်းကိုပြုစုပြီးပါပြီ။ ၎င်းတို့အနက်မည်သူမျှမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုအတည်ပြုနိုင်သည် (ငရုတ်ကောင်းမပါသော)
• Brainstorm (သို့) Green Needle (သို့) ဒီအသံဖမ်းထဲမှာသင်နှစ်ခုလုံးကြားနိုင်ပါသလား။ ဒါကြောင့်ပဲ